iWisoft free video converter (All in one)ရုပ်သံ တေးဖြတ် မျိုးစုံအသုံးဝင်သည် - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
iWisoft free video converter (All in one)ရုပ်သံ တေးဖြတ် မျိုးစုံအသုံးဝင်သည်
converter တွေ ပေါများလှပါတယ်. မိမိအသုံးတည့်တာကို သုံးလို့ရအောင် သိတာလေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်. ဒီဟာလေးက တော်တော်လေးကို ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ပါတယ် free စစ်စစ်လေးပါ. သုံးကြည့်ရင်ပိုသိပါလိမ့်မယ်
AVI, MPEG, WMV, DivX, XviD, MP4, H.264/AVC, AVCHD, FLV, MKV, RM, MOV, 3GP, and audio MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG. Directly convert video for playback on your PSP, iPod, iPhone, Apple TV, PS3, Xbox, Zune, Creative Zen, Archos and other digital multimedia devicesiWisoft free video converter (All in one)ရုပ်သံ တေးဖြတ် မျိုးစုံအသုံးဝင်သည်
အပြင် gif, jpg စသည့် ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာတွေမှာပါ သုံးလို့ရပါတယ်. vcd သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို swf file (flash song) အဖြစ်ပြောင်းလို့လဲရပါတယ်. မိမိအလိုရှိသလို ဖြတ်တောက်ပြီး လိုသည့်အပိုင်းကို ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်
စိတ်ဝင်စားရင်တောိ့download လုပ်လိုက်ပါ exe ဖိုင်ကတော့ 452 kb တည်းပါ exe ဖိုင်ကို run လိုက်ရင်တော့ အောက်ကအတိုင်း
8.7 MB ထပ်ဒေါင်းရပါလိမ့်မယ်
ကျန်တဲ့ နောက်လာမဲ့ဟာတွေကို Next> ကိုပဲနိုပ်ပေးလိုက်ပါ
ပုံထဲက၀ိုင်းပြထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကိုဖွင့်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက် ကလိ လို့ ရပါပြီ
ဒေါင်းလို့ ရတယ် Run လို့လဲ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွင့်ရ၀ူးဂျာ။ ဖွင့်လိုက်ရင် checking update တဲ့ ပြီးလဲ ပြီးရော failed to connect to the server တဲ့ဂျာ။ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမလဲ ပြောပြကြပါဦးဗျိုးးးးးးးး chitchitkoko13@gmail.com ကို သနားသဖြင့် မေးလ်ပို့ပြီး ရှင်းပြပေးပါခင်ညာ....